जापानमा डिसेम्बर! कसरी जाडो चाँडो रमाइलो गर्न - Best of Japan
ह्विस टेन बॉश जापानको नागासाकीमा थिम पार्क हो जुन पुरानो डच भवनहरूको वास्तविक आकारको प्रतिलिपिहरू प्रदर्शन गरेर नेदरल्याण्ड्सलाई पुनःभेट ​​गर्छ। = शटरस्टक
जापानी जाडो कसरी रमाइलो गर्ने! स्की रिसोर्ट, चाडपर्व, बहाव आइस आदि। >
जापानमा डिसेम्बर! कसरी जाडो चाँडो रमाइलो गर्न
डिसेम्बरमा जापान एकैचोटि चिसो हुन्छ। वर्षको यस समयमा, जापानी शहरहरू क्रिस्मस इल्मिनेमेसनद्वारा राम्ररी रंगिएका छन्। जापानमा त्यहाँ केही ईसाईहरू छन्, तर जापानी मानिसहरूलाई घटनाहरू मनपर्दछ, त्यसैले उनीहरूले क्रिसमसको वातावरणको आनन्द लिन्छन्। यदि तपाईं डिसेम्बरमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाईं यी सुन्दर प्रकाश र वातावरणको मजा लिन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, केही क्षेत्रमा हिउँ पर्न थाल्छ, त्यसैले तपाईं हिउँ परिदृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
टोकियो, ओसाका, होक्काइडो को डिसेम्बरमा जानकारी
हिउँ दृश्यहरु को अनुभव
यदि तपाईं डिसेम्बरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् अधिक जानकारी हेर्नका लागि।
टोकियो मौसम डिसेम्बर मा! तापमान, वर्षा, लुगा
डिसेम्बरमा, टोकियो मा मौसम स्थिर छ र यो घाम को लागी जारी रहनेछ। डिसेम्बरमा, टोकियोमा लगभग हिउँ छैन। जे होस्, कृपया कोट वा जम्पर ल्याउनुहोस् किनकि यो धेरै चिसो छ। यदि तपाईं लामो समय बाहिर घर बाहिर हुनुहुन्छ भने जाडोको कपडा आवश्यक छ। यस पृष्ठमा, म २०१ Tok को टोकियो मौसम डेटाको परिचय दिनेछु। कृपया यस मौसम डाटालाई सन्दर्भ गर्नुहोस् र तपाईंको यात्राको लागि तयारी गर्नुहोस्। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल डिसेम्बरमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। जाडोको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। डिसेम्बरमा टोकियोमा सामग्री वेटर (सिंहावलोकन) डिसेम्बर (२०१ 2017) को बीचमा टोकियो मौसम डिसेम्बर (२०१ 2017) को बीचमा टोकियो मौसम डिसेम्बर (२०१ 2017) मा टोकियो मौसम डिसेम्बरमा (ओभरभ्यू) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन डिसेम्बर मा - जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा जारी डाटा को आधार मा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 2017 30१-२०१०) डिसेम्बरमा, टोकियो अन्तत: पूर्ण हिउँदको मौसममा प्रवेश गर्दछ। यस समयमा धेरै मानिसहरू कोट र जम्पहरू लिएर आउँदछन्। यो अझै जनवरी र फेब्रुअरीको तुलनामा अपेक्षाकृत तातो छ, तर यदि तपाईं न्यानो देशबाट जापान भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि जाडोको लागि पर्याप्त तयारी गर्नुहोस्। मौसम डिसेम्बर मा राम्रो छ। आकाश ...
ओसाका डिसेम्बरमा मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
डिसेम्बरमा, पूर्ण हिउँद ओसाकामा आउँनेछ। सडकमा रूखका पातहरू खस्छन् र ती ना bare्गो हुन्छन्। यसको सट्टामा, क्रिसमसको रोशनी रूखहरूलाई दिइन्छ र तिनीहरू राती सुन्दर देखिन्छन्। यदि तपाइँ यस पटक ओसाकामा बस्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया तपाइँको कोट ल्याउनुहोस् किनभने चिसो छ। यस पृष्ठमा, म डिसेम्बरमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल डिसेम्बरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो र ओसाका जान चाहानुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा एकदम फरक छ। डिसेम्बरमा ओसाकामा सामग्री वेदर (अवलोकन) डिसेम्बर (२०१ 2017) को ओसाका मौसम डिसेम्बरको बीचमा (२०१ 2017) ओसाका मौसम डिसेम्बरको बीचमा (२०१ 2017) ओसाका मौसम डिसेम्बरमा (ओभरकाइट) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन डिसेम्बर मा - जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा जारी डाटा को आधार मा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको डिसेम्बरको मौसम टोकियोसँग मिल्दोजुल्दो छ। वर्षाका दिनहरू थोरै हुन्छन्। यो या त सुन्दर निलो आकाश वा चिसो देखिने बादल आकाश हो। डिसेम्बरमा, तापक्रम दिनको सबैभन्दा तल्लो समयमा १ 2010 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ। बिहान र बेलुका, यो फ्रिजबाट तल झर्दछ। यो जनवरी वा फेब्रुअरी भन्दा अलि तातो छ, तर यदि तपाईं राम्रो हुनुहुन्न ...
हुइस टेन बॉश = शटरस्टक
प्रमुख जापानी शहरहरूमा, क्रिसमसको प्रकाशहरू डिसेम्बरमा सुन्दर छन्। धेरै सडक रूखहरू एक्लो वातावरण हुन्छ किनकि पातहरू सबै छरिएका हुन्छन्। रोशनीले त्यो एक्लो वातावरणलाई परिवर्तन गर्दछ र हाम्रो हृदय उज्ज्वल बनाउँछ। क्रिसमस गीतहरू शहर वरिपरि सुन्न सकिन्छ।
क्रिश्चियन देशका मानिसहरु लाई यो अनौठो हुन सक्छ तर जापानीहरु को लागी, क्रिसमस एक महत्त्वपूर्ण समय हो। जापानी मानिसहरु एक अर्कालाई उपहार दिन्छन्, आफ्नो परिवार सहित, र एक राम्रो समय छ। प्रेमीहरूले क्रिसमसको सजावटको साथ र colored्गीन रेष्टुरेन्टमा एउटा विशेष समय साझा गर्छन्।
माथिको तस्वीरले क्युसुको ह्युस टेन बॉश थिम पार्कमा हरेक वर्ष डिसेम्बरमा आयोजित रोशनी देखाउँदछ। प्रत्येक वर्ष, टोक्यो डिज्नी रिजोर्ट र ओसाकामा युनिभर्सल स्टुडियो जापानले यस्तै सुन्दर प्रकाशहरू तयार पारेको छ। कृपया यी क्रिस्मस इलिमिनेमेसनलाई एक नजर राख्नुहोस्।
जब क्रिसमस सकियो, जापानका मानिसहरू नयाँ वर्षको लागि तयारीमा व्यस्त हुनेछन्। जापानी मानिसहरु नयाँ सालमा "ओसेची" र भातको केक भनिने विशेष पकवानहरू खान्छन्। धेरै खरीदारहरू किनमेल क्षेत्रहरूमा जान्छन् यी खानाहरू तैयार गर्नका लागि। जब हामी यस्तो जीवन्त दृश्य देख्छौं, हामी नयाँ वर्ष नजिक भएको महसुस गर्छौं। यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, कृपया शपिंग जिल्ला भ्रमण गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि टोकियोको "Ameyoko", र वर्षको अन्तमा दृश्यहरू आनन्द लिनुहोस्।
होक्काइडो र तोहोकु क्षेत्र (उत्तरी मुख्य होन्शु), हिउँ पर्न थाल्छ। जापान सागर छेउको होन्शुको क्षेत्र (निगाता प्रान्त आदि) र हिमाली मौसम पनि हिउँ मौसममा।
प्रत्येक वर्ष, मौसम थोरै फरक हुन्छ, तर होक्काइडोमा स्की रिसोर्ट्स नोभेम्बरको अन्तदेखि काम गर्न थाल्छ। मेजर स्की रिसोर्ट्स डिसेम्बरको अन्तदेखि होन्शुमा सञ्चालन सुरु हुनेछ। यदि तपाईं डिसेम्बर मा जापान मा यात्रा, तपाईं यी स्की क्षेत्रहरु मा स्कीइled, स्नोबोर्डिंग, स्लेडिding आदि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि हालसालै ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावका कारण हिन्शु रकम डिसेम्बरको अन्तमा होन्शुको स्की रिसोर्टमा भने वर्षको आधारमा थोरै हुन सक्छ।
प्रत्येक वर्ष शिराकागोगो, मुख्य होनुको हिमाली क्षेत्र, डिसेम्बरको अन्ततिर हिउँ पर्न थाल्छ। डिसेम्बर को शुरुवात मा, तपाईं हिमाली सुविधाहरूको साथ Shirakawago देख्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ हिमपात हुने क्षेत्रहरूमा धेरै तातो स्प्रि .्गहरू छन्। जाडो महिनाहरूमा, तपाई तातो स्प्रि with्गले तपाईंको शरीरलाई तताउन सक्नुहुन्छ।
"जापानी जाडो कसरी आनन्द लिने" मा फिर्ता
जापानमा फेब्रुअरी! कसरी सुन्दर हिउँदको संसारको मजा लिन
जापानमा मार्च! दुबै जाडो र वसन्तको आनन्द लिनुहोस्!
जापानी जाडो कसरी रमाइलो गर्ने! स्की रिसोर्ट, चाडपर्व, बहाव आइस आदि।
जनवरी मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
ओसाका फेब्रुअरी मा मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
ओसाका जनवरीमा मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा